Prostokvasha - tsara sy ratsy
"Misotroa miaraka amin'ny menaka voahitsakitsaka - Aza manimba anao ny menaka!"
Ity zaza amam-panahy ity, raha vao jerena ny tononkalo vendrana, mety ho tsaroantsika tsirairay avy amin'ny fahazazany ny tsirairay amintsika. Saingy tsy adala toy ny hita izy. Ao amin'ny fanoloran-jaza, ny iray amin'ireo toetra manan-danja indrindra amin'ity vokatra fahagagana ity dia navela: ny maha-izy azy sy ny mora simba, raha ny tena marina, izay mahasoa amin'ny ronono mihetsiketsika.
Prostokvasha - toetra mahasoa
Eo am-pialana amin'ny fanontaniana mikasika ny tombontsoa sy ny fahasimban'ny ronono voapetaka, dia hiatrika ny tena endriky ny vokatra isika. Ny rongony ho an'ny famokarana yogora dia ronono voaloto, izay arovana amin'ny kolontsaina madio avy amin'ny bakteria asidra mamy, izay itambarana azy, ary ny vokatra dia vokatra azo avy amin'ny asidra.
Toa miatrika ny vokatra tranainy indrindra amin'ny fikarakarana izahay, izay manana ny toetra mahasoa sy ny fanamoràna ny famokarana dia nahafahan 'izy tsy hoe tsy ho very ao amin'ny tantara, fa mba hahatratra ny androntsika tsy misy fiovana.
Inona no fampiasana sy fanimbana ronono voadidy?
Ny Prostokvasha dia loharano tsy manam-paharoa vitaminina sy asidra amina izay tsy azo zaraina ho an'ny olombelona. Manatsara ny asan'ny tsinay, mampiroborobo ny tsiambaratelo sira amin'ny tsiroaroa, dia mibahana tsara amin'ny zavamiaina rehetra - ao anatin'ny ora iray monja dia misy ny fanamafisana tanteraka.
Manomboka andro iray amin'ny ronono misy ronono iray dia tokony ho fitsipika henjana ho an'ny olona salama, ary, raha ny tena izy, na inona na inona vanim-potoana, ary na inona na inona raha mifikitra amin'ny sakafo ho an'ny yogourt ianao, na hampiditra tsotra izao ny vokatra ho an'ny sakafo. Fa! Olona salama! Ny ronono voapotsitra dia tsy mety ny misotro toaka amin'ny pancreatitis mahery, cholelithiasis ary hepatita.
Ankoatra izany, ny voka-dratsin'ny ronono mihetsiketsika dia mety hipoitra amin'ny hormonina manimba, gastritis amin'ny asidiky avo, ny fery maloto. Tena mahasosotra amin'ity tranga ity ny tsy fisian'ny yoghurt vaovao.
Noho izany, raha toa ianao ka mijaly noho ny aretina ao amin'ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinal, Ny filankevitra momba ny sakafo ara-pahasalamana za-draharaha dia tena ilaina.
Azo antoka fa ny yogourt dia vokatra tsara amin'ny sakafo izay mampiroborobo ny fihenam-bidy, fitaovana hiadiana amin'ny fihanaky ny rivotra , ary ny fanentanana voajanahary mahatalanjona ny tsinay. Eny, amin'ny ady amin'ny "fisotroan-dresaka omaly" - yoghurt, angamba, tsy misy mitovy!
Tsara ny manamarika, fa ny tena lamaody amin'izao fotoana izao, alohan'ny hanapahanao hanomboka ny lanjany amin'ny yogourt, manandrana manao ny yogourt tena voajanahary amin'ny toeram-pambolena voaaro iray any ambanivohitra, fa tsy avy amin'ny fivarotana iray izay ahafahanao manoratra na inona na inona amin'ilay labozia!
Red currant - toetra mahasoa
Amin'ny firy no tsara kokoa ny fanatanjahantena, raha jerena ireo rhythms biolojika?
Ny anana - tsara sy ratsy
Firy ny kaloria amin'ny sôkôla?
Azo atao ve ny mihinana rongony raha lany lanja?
Ny tsy fahampian'ny magnesium - ny soritr'aretina
Sakafom-biby misaraka: resipe
Ny divay dia tsara
Fitoerana - ahoana no fomba hanaovana safidy tsara?
Ny tanana sy ny tongotra Nemeti - ny antony sy ny fitsaboana
Fitafiana ho an'ny teratany Yorkshire
Kitapo fandroana - torohevitra tsotra ho an'ny fisafidianana sofina mahazatra
Zavina amin'ny amber - marika amber jewelry tsara indrindra
Ny fiheverana ny zoma 13
Sary hosodoko Latex
Bizeboard ho an'ny zanakao
Ahoana no hanamboarana vavony?
Aretina amin'ny tongotra
Iza no hifidy an'i Benjy Madden: Cameron Diaz na Jesse Jay?
Magnelis mandritra ny fitondrana vohoka
Ny fahamarinana manafintohina momba ny vakoka HPV: zava-misy momba ny dokotera manala baraka
Fanandramana ara-tsiansa majika